Cloud Object Storage (aka) Amazon Simple storage service (S3) - AWS User Group Myanmar
မနက်မိုးလင်းတော့ Cloud Front က Object Cache လေးကို invalidate လုပ်နေတုန်း စဉ်းစားကြည့်တော့ Object Storage အကြောင်းလေးတွေးမိရာကနေ AWS S3 အကြောင်းရေးမယ်ပေါ့ ပီတော့ ကိုယ့်လူ ဝေယံမင်း ကလည်း ကိုဖြိုး S3 အကြောင်းလေးရေးရအောင် စာမေးပွဲအတွက်လည်း ပြင်ဆင်နေတုန်းလေးဆိုတော့ရေးမယ်ပေါ့ ဘာညာနဲ့ ဒီ article လေးကိုရေးမိသွားတယ်။
AWS S3 ကို မပြောခင် Storage Type ဘယ်နှစ်မျိုးရှိလဲ တစ်ချက်လောက်လေ့လာကြည့်ကြည့် ရအောင်... Storage Type ဘယ်နှစ်မျိုးရှိသလဲ ဆို တော့ 1. File Storage 2. Block Storage 3. Object Storage ဆိုပြီးတော့ ရှိကြပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
File Storage [Image Credit : redhat.com]
File Storage လို ပြောလိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို.တော်တော်များများ ရင်းနှီးပီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Files တွေ Folders တွေကို Network ကနေတဆင့် Share ပြီးသုံးကြတာပါ။ Data တွေက File Server ရဲ့ folder တစ်ခုမှာ စုဝေးထားပြီးတော့ တခြားသော ကွန်ပြူတာကနေ တဆင့် Data တွေကို သိမ်းဆည်းထားပါတယ်။
Block Storage [Image Credit : redhat.com]